AHOANA NY FOMBA HITADIAVANA MAILAKA AO AMIN'NY OUTLOOK? ALEFASO NY MAILAKA - MALEMY
Efa nandefa mailaka tsy nahy ve ianao ka nanenina avy hatrany? Raha mpampiasa Outlook ianao dia azonao atao ny manafoana ny hadisoanao. Intyny fomba ahatsiarovanao mailaka ao amin'ny Outlook.
Misy fotoana vitsivitsy izay maika hanindriana ny bokotra fandefasana ary handefa mailaka tsy feno na diso. Ireo lesoka ireo dia mety hiteraka valiny mafy arakaraka ny haavon'ny fahamatorana eo amin'ny fifandraisana misy eo aminao sy ilay mahazo anao. Raha mpampiasa Outlook ianao, dia mety mbola hisy ny fotoana hanavotana ny tavanao amin'ny fampatsiahivana ilay mailaka. Azonao soloina na tadidio ny mailaka ao amin'i Outlook ao anatin'ny tsindry vitsivitsy monja raha toa ka afa-po ny fepetra sasany ary atao ara-potoana ny hetsika.
fifandraisana eo an-toerana tsy misy fampifanarahana ip mety
Fepetra hanoloana na hitadiavana mailaka nalefanao tao amin'ny Outlook
Inona no hitranga aorian'ny fitadidiana na fanoloana ny mailaka ao amin'ny Outlook?
Safidy iray amin'ny fitadidiana na fanoloana hafatra amin'ny Outlook
Manemotra ny fandefasana mailaka ao amin'ny Outlook
Na dia ny dingana ho esory na soloo ny mailaka ao amin'ny Outlook dia tena mora ary azo atao amin'ny tsindry vitsivitsy, ny endri-javatra dia azo ampiasaina raha tsy hoe afa-po ny fepetra vitsivitsy. Alohan'ny hitsambikinana ireo dingana, dia andao jerena ireo fepetra mahasoa amin'ny fampatsiahivana na fanoloana mailaka:
Samy manana ny Microsoft Exchange na ny kaonty Office 365 ianao sy ilay mpampiasa iray hafa.
Tsy maintsy mampiasa Outlook ao amin'ny Windows ianao. Tsy azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa Outlook amin'ny Mac na Web ny endri-javatra fampahatsiahivana.
Fiarovana ny vaovao Azure tsy tokony hiaro ny hafatry ny mpandray.
Ny mailaka dia tokony hovakin'ilay mpandray ao anaty boaty. Tsy mandeha ny fampahatsiahivana raha vakiana na voasivana amin'ny alàlan'ny fitsipika, sivana spam, na sivana hafa amin'ny mailaka mpandray ny mailaka.
Raha tsara avokoa ireo fepetra etsy ambony ireo, dia mety hisy azonao atao tadidio ny mailaka ao amin'i Outlookamin'ny fanarahana ireo dingana etsy ambany:
Ity fomba ity dia azo ampiasain'ny mpampiasa amin'ny Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016, ary Outlook 2019 sy ny Office 365 ary ny Microsoft Exchange mpampiasa.
1. Tadiavo ny ‘ Entana nalefa ’Safidy ary kitiho hanokatra azy.
2. Sokafy ny hafatra te-hanolo na hahatsiaro ianao amin'ny fipihana roa heny. Ny fampiasa dia tsy ho azo zahana amin'ny hafatra rehetra ao amin'ny Reading Pane.
3. Tsindrio ny ‘ asa ’Eo amin'ny kiheba hafatra. Hiseho ny menio mitete-midina.
Windows 10 mandatsaka fifandraisana Internet
4. Tsindrio ny ‘ Tadidio ilay hafatra . '
5. Hiseho ny boaty fifanakalozan-kevitra ‘Avereno ny hafatra’. Azonao atao ny misafidy iray amin'ireo safidy roa hita ao anaty boaty. Raha te-hanala ny mailakao fotsiny avy amin'ny boatin-kafatra ny mpandray, dia safidio ny ' Hamafa ny kopian'ity hafatra ity izay tsy mbola novakiana ’Safidy. Azonao atao ihany koa ny manolo mailaka vaovao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny ‘ Fafao ireo kopia mbola tsy novakiana ary soloina hafatra vaovao ’Safidy.
6. Zahao ny ‘ Lazao amiko raha nahomby na tsy nahomby ny fahatsiarovan-tena ho an'ny mpandray tsirairay ’Boaty hahafantarana raha nahomby na tsia ny tadidinao sy ny fanolo anao. Tsindrio eo ok .
tsy afaka mametraka fanavaozana ny windows
7. Raha misafidy ny safidy farany ianao dia hisokatra ny varavarankely misy ny hafatrao tany am-boalohany. Azonao atao ny manova sy manova ny atin'ny mailakao araka ny itiavanao azy ary mandefa azy.
Raha tsy azonao ny safidy tadidy, dia misy ny mety tsy hahafa-po ny iray amin'ireo fepetra etsy ambony ireo. Ampahatsiahivo ny mailaka ao amin'ny Outlook raha vantany vao mahatsapa ny hadisoanao satria hazakazaka mifanohitra amin'ny fotoana ary raha efa namaky ilay hafatra ny mpandray na tsia. Raha nandefa ny mailaka tamin'ny mpampiasa maro ianao dia hatao ihany koa ny andrana fampahatsiahivana ho an'ireo mpampiasa rehetra. Tsy afaka misafidy ireo safidy tadidy ho an'ireo mpampiasa voafantina ao amin'ny Outlook ianao.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hamoronana kaonty mailaka vaovao Outlook.com?
Rehefa avy nanao ny ezaka nataonao ianao, ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana dia hiankina amin'ny fepetra manokana sy ny antony manokana. Hampandrenesina anao ny amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana raha nanamarina ny ‘ Lazao amiko raha nahomby na tsy nahomby ny fahatsiarovan-tena ho an'ny mpandray tsirairay ’Safidy ao anaty boaty fifampiresahana. Ao anatin'ny toe-javatra mety dia tsy ho fantatry ny mpandray fa nisy hafatra nampahatsiahy avy tao amin'ny boaty. Raha ny ‘ Ataovy mandeha ho azy ny fangatahana fivoriana sy ny valin'ny fangatahana fivoriana ’Dia alefa amin'ny lafin'ny mpandray, avy eo tsy mila miahiahy na inona na inona ianao. Raha tsy mandeha io dia hahazo fampandrenesana momba ilay hetsika fampahatsiahivana ny hafatra. Raha tsindriana aloha ny fampandrenesana dia haverina ny hafatra, fa raha nosokafana aloha ny boaty fampidirana ary manokatra ny hafatrao ny mpampiasa dia tsy hahomby ilay fahatsiarovana.
Tsy misy antoka ny amin'ny fahombiazana rehefa mahatadidy hafatra ao amin'ny Outlook. Ireo fepetra ilaina dia mety tsy ho afa-po isaky ny manao fahadisoana ianao. Izy io dia afaka mampita hafatra diso amin'ireo mahazo anao ary mahatonga anao ho tsy matihanina. Afaka mampiasa safidy hafa ianao izay hanampy bebe kokoa amin'ny ho avy.
Raha olona tompon'andraikitra ianao, dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny sarinao ny fandefasana hafatra feno hafatra. Azonao atao ny manemotra ny fotoana handefasana mailaka ao amin'ny Outlook mba hanananao fotoana hanitsiana ny lesoka nataonao. Izany dia atao amin'ny fitazonana ireo mailaka ao amin'ny Outlook Outbox mandritra ny fotoana maromaro alohan'ny handefasana azy ireo any amin'ny mpampiasa farany.
1. Mandehana any amin'ny rakitra kiheba
exe mankany apk mpanova rakitra
2. Safidio ny ‘ Tantano ny safidy Fitsipika sy fanairana 'Eo ambanin'ny fizarana info ao amin'ny ‘ Tantano ny lalàna sy ny fanairana . '
3. Tsindrio ny ‘Fitsipika momba ny mailaka 'Vakizoro ary fidio' Fitsipika vaovao . '
4. Mandehana mankany amin'ny ' Manomboka amin'ny fitsipika banga ’Fizarana ao amin'ny Wizard Fitsipika. Tsindrio ny ‘ Ampiharo ny fitsipika alefako 'Ary tsindrio' Manaraka . '
5. Misafidiana ‘ Mampiato minitra maromaro 'Ao amin'ny' Safidio ny hetsika ’Lisitra.
6. Misafidiana isa maromaro ao amin'ny ‘ Amboary ny famaritana fitsipika ’Lisitra.
7. Soraty ny isan'ny minitra tianao hampihemotra ny mailakao ao amin'ny ‘ Fanaterana nahemotra ’Boaty. Afaka misafidy 120 minitra farafahakeliny ianao. Tsindrio eo Manaraka .
8. Safidio izay faningana tadiavinao ary kitiho ny ‘ Manaraka . '
Windows 10 iTunes tsy hahafantatra iphone
9. Omeo anarana ny fitsipikao ao amin'ny ‘ Manondro anarana ho an'ity fitsipika ity ’Boaty. Zahao ny ‘ Alefaso ity lalàna ity 'Boaty ary kitiho ny' farany . '
10. Tsindrio eo ok hampihatra ny fanovana.
Amin'ny fanemorana ny hafatra manokana amin'ny fotoana fanoratana:
Mandritra ny famoronana ny hafatra dia mandehana mankany amin'ny ‘ FANDIKANA 'Vakizoro ary fidio' Fanemorana ny fandefasana . '
Safidio ny ‘ Aza manatitra mialoha 'Safidy ao amin'ny' Properties ’Boaty fifampiresahana.
Safidio ny daty sy ora tianao ny handefasana ny hafatra ary hanidy ny varavarankely.
Amboary ny Outlook fa tsy mandrindra amin'ny Android
Ahoana ny fandefasana fanasana kalandrie amin'ny Outlook
Ahoana ny fanadiovana ny filaharana pirinty ao amin'ny Windows 10?
Ahoana ny fomba hanoratana horonantsary mihetsika miadana amin'ny telefaona Android?
Manantena izahay fa nanampy ity torolàlana ity ary afaka ianareony tadidio ny mailaka ao amin'i Outlook . Ampiasao ny safidy tadidy raha vantany vao mahatsapa ianao fa nanao hadisoana. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanemotra ny hafatrao amin'ny fanarahana ireo dingana etsy ambony raha toa ianao ka miatrika olana matetika. Raha toa ka tsy afaka manolo na tadidio ny mailaka ao amin'ny Outlook , avy eo mandefasa fialantsiny amin'ireo mpandray azy tsirairay avy ary mandefasa mailaka hafa miaraka amina hafatra marina.
youtube raha tsy manomboka chrome vetivety ny playback
ny fomba fanamboarana lisansa windows dia ho tapitra tsy ho ela
iray na maromaro ireo singa fanavaozana ny varavarankely dia voalamina tsy mety.
windows malemy wifi windows 10